देशले नयाँ राजनीतिक निकाश खोजिरहेको छ तर पाउन सकेको छैन । नेपालि कांग्रेसले केहि नेताहरुले देशले निकाश पाउनको लागि ओली सरकारको वहिर्गमन आवश्यक रहेको बताउंदै आएका छन् ।
तर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस अझै पनि स्पष्ट हुन् सकेको छैन ।
कांग्रेसले सरकारलाई निकाश दिनको लागी आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेको नेपालि कांग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले आगमनखबर संगको कुराकानीमा बताईन ।
प्रस्तुत छ प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलासंग आगमनखबरकर्मी दिनेश अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशको राजनीतिक अवस्थालाई एउटा सांसदको हिसाबले कसरि नियाल्नुभएको छ ?
देश राजनीतिक दुर्घटनाउन्मुख अवस्थामा रहेको छ । अहिले देशले एउटा निकाश खोजिरहेको छ । तर पाउन सकेको छैन । वर्तमान ओली सरकारको बहिर्गमन आवश्यक छ भन्ने अनुभव भईरहेको छ । ओली सरकार टिक्ने बेलासम्म देशले निकाश पाउंदैन भन्ने हाम्रो साझा धारणा बनेको छ ।
नयाँ सरकार गठबन्धनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालि कांग्रेसको स्पष्ट धारणा के हो ?
हामि सिधै सरकारमा जानको लागि हामि संग पर्याप्त सिट संख्या छैन । जनताले हामीलाई ५ वर्षको लागि प्रतिपक्षीमा बस्न भनेर पठाएका हुन् । सरकार निर्माणको विषयमा नेपालि कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) र नेकपा माओवादी केन्द्र संग छलफल गरिरहेको छ । परिआएको खण्डमा नेपालि कांग्रेसले देशलाई निकाश दिनको लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको छ ।
कांग्रेसभित्र पनि दुई गुटबीच मतभेद भएको छ , वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई तत्काल हटाईहालौं भन्नुभएको छ, तर सभापति देउवा अझै ‘वेट’ को रणनीतिमा हुनुहुन्छ नि ?
कांग्रेस सभापतिले केन्द्रीय कमिटीमा भएको निर्णयलाई लिएर अन्य दलसंग वार्ता गर्ने हो । बाहिर सतहमा प्रस्तुत गरिएका विचारधाराले खासै केहि अर्थ राख्दैन, केन्द्रीय समितिको बैठक नै आधिकारिक हुन्छ । कांग्रेसले ओली सरकारको बहिर्गमन नै चाहेको छ । मतभेद छैन, यो गलत व्याख्या हो ।
देउवा निष्क्रीय भए, सरकार बनाउनको लागि जति अग्रसरता देखाउन पर्ने हो त्यो देखाएनन भन्ने आरोप पनि जीवित छ नि ?
कांग्रेसले चासो नै नराखेको भन्ने पनि होईन । हामीले चाहँदैमा सरकार बनिहाल्ने पनि होईन । हामि जाँदैमा निकाश आईहाल्ने पनि होईन । हामीले कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीलाई बहिर्गमन गर्यो भने निकाश दिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसके । कांग्रेसले अग्रसरता देखाईरहेको छ । चासो नै नदिएको भन्न मिल्दैन ।
संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि जसरी केहि शक्तिहरु लागिपरेका थिए, तिनै शक्तिहरु अहिले एक भएर अगाडी बढेमा सरकार बन्न सक्छ ।
कांग्रेस नयाँ सरकार बनाउने चाहना भन्दा भन्दा पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ जान चाहेको हल्ला छ त ?
खासमा यो विषयमा केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन । केहि व्यक्तिहरुको धारणा फरक फरक होला त्यो अलग कुरा हो । संस्थागत कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ ।
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा कुन पदमा उठ्ने निर्णय गर्नुभएको छ ?
यो महाधिवेशनमा महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र नभएर नेतृत्व गर्ने भन्ने मेरो एजेन्डा रहेको छ । आगामी महाधिवेशनमा मा पदाधिकारिमा उठ्ने निर्णय गरेकी छु ।
तपाईं सरकारको छायाँ श्रममन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सरकारले गरेको कामलाई कसरि हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको श्रममन्त्री संग मेरो संवाद भईरहेकै छ । देशमा रोजगारी नभएर धेरै युवाहरु विदेशिनुपरेको अवस्था त छदैं छ , देशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेकै छ ।
देश थप राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि के गर्नुपर्ला , तपाईको सुझाव के छ ?
आज नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु खण्डिकरणको अवस्थामा रहेका छन् । देशको राजनीतिक दलहरु आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीको स्वार्थलाई नहेरिकन काम गर्यो भने राजनीतिक निकाश आउन सक्छ । ओली सरकारको वहिर्गमन तत्काल आवश्यक छ ।